Isikhathi esikhululekile | eactivo | Spanish for immigrants
24 March, 2013 | 3 Izibuyekezo
Lapha sethula ingxenye isiqophi yesibili Isikole abafana bethu, Gonzalo, Bea, Mikel noDavide. Kulokhu sikhuluma ngalokho abakwenzayo isikhathi sabo mahhala futhi kungani othanda ukuzenza labo imisebenzi.
Kulesi umsebenzi siphinde uthande ukuzibuza umbuzo yini isikhathi wena ezokungcebeleka? Sifuna ukuthola ezihluke ngazo nezinto ezifana phakathi isiko lakho nokuthi of Spain. Sithemba oyithandayo: isikhathi khulula.
Le vidiyo ezingeni A1, kodwa umsebenzi iwukuba A2 ezingeni.
Ungakhohlwa nithumele imibono yenu, noma ebhaliwe imibuzo!
Isikhathi esikhululekile kusukela e-asset on Vimeo.
Kushicilelwe e: A2 Exercises, Videocast A2
Tags: A2 , bhala , lalela , Spanish , Luhlelo , videocast , Silulumagama
3 Amazwana “Isikhathi esikhululekile”
Kuhlala ekhatsi Cuba
April 13, 2013 ukuze 1:27
ewusizo kakhulu futhi uyafundisa.
October 24, 2015 ukuze 2:25
Othile kungasiza ngiqonde ukuthi le ntombazane ithi engxenyeni yokuqala? Kuyinto engikuzwa “yezandla” futhi “iwashi TV” kodwa uma ngithola ukuthi yini kwaba / iyona umsebenzi wesibili.
October 27, 2015 ukuze 11:12
Ngingu Delia, omunye wothisha ezimbili eactivo. Ngiyajabula ukusiza, kodwa mina ngeke baqonde umbuzo wakho ngempela.
1. Wena uke wezwa ezinhle kakhulu!, intombazane ithi: “okwenza obuciko ukubukela i-TV ekhaya”.
2.Ngicabanga ukuthi umsebenzi Owesibili yilo “Buka ividiyo, ezwa igama imisebenzi bathi uzibhale ngezansi”, Kwesokudla? Uma le dokhumenti, I ukuchaza:
*Okokuqala ulalele izingane futhi une ukubhala igama imisebenzi okuzwile. Akukhona nje intombazane, uma kungezona zonke, izingane futhi.
*Khona-ke kufanele ucabange: Isho ukuthini? Futhi ingabe ungakwazi ukuchaza it in Spanish? Isibonelo: “yezandla” Kusho ukwenza umsebenzi zokuhlobisa ngezandla zakho, isibonelo. Uma ungenalo baqonde noma yimuphi umsebenzi, ngifuna kusichazamazwi noma ungibuze.
*Khona-ke kufanele ucabange ngalokho okwenzayo-spare time sakho, uyathanda ukwenza.
sicela, uma kwakungeyona umbuzo wakho, unganqikazi ningithinte futhi.
Ngiyabonga kakhulu futhi ukubingelela,